Foxconn waxay u gudbin laheyd xakamaynta tayada iPhone 6 | Wararka IPhone
Foxconn waxay bilaabaysaa xakamaynta tayada ee iPhone 6 kahor wax soosaarka tirada badan
Wax ka yar bil ayaan sugeynaa si aan u hubino in iyo inkale wararka xanta ah ee soo jeedinaya in iPhone 6 lagu soo bandhigi doono Sebtember 9. Dhanka kale warbaahinta Shiinaha way soo sheegaan in warshadaha ee Foxconn dalka ayaa horeyba u fulinaya iPhone 6 nidaamka xakamaynta tayada si buuxda isu soo urursaday, ka hor wax soo saarka silsiladda weyn si loo daboolo baahida sare ee la filayo.
Waxaa macquul ah in iPhone 6 uu yahay taleefanka shirkadda abuureysa rajada ugu badan, dadka isticmaala waxay filayaan kacdoon ka socda shirkadda Apple oo leh shaashad ballaaran, astaamo cusub, shaqooyin iyo suurto gal inay tahay batteri leh ismaamul ballaaran. Foxconn waxay horeyba u sameyn laheyd tijaabooyinka isku imaatinka si loo arko haddii wax soo saarku u shaqeynayo si sax ah iyo haddii qalabku diyaar u yahay in la iibiyo. Nidaamkan waxaa loo yaqaanaa tijaabada ansaxinta wax soo saarka ama PVT (laga bilaabo Imtixaanka Wax-Soosaarida Ingiriisiga).
Nidaamka PVT waxaa lagu tilmaami karaa a khadka kulanka ee xawaaraha buuxa taas oo tiro yar oo ka mid ah iPhone 6s la soo saaray, si loo tijaabiyo sida khadka isku imaatinku u dhaqmo iyo Hubi in aysan cillad ku jirin howsha oo dhan taasi waxay si dhab ah dib ugu dhigi kartaa wax soo saarka dhowr toddobaad ka dib soo bandhigiddeeda iyo sii deynta ku xigta ee iibka. Haddii inta lagu jiro tijaabooyinkan PVT aan wax dhibaato ama cillad ah la ogaan, hawsha waa la oggolaaday oo soo saaridda ballaaran ee unugyada qalabka cusub ayaa bilaaban kara.
Suurtagal macluumaadku wuxuu ku saabsan yahay nooca iPhone 6 oo leh shaashad ballaaran, kaas oo mari lahaa tijaabooyinkan waxsoosaarka waxsoosaarka, tan iyo markii lagu saleeyay wararkii badnaa ee sanadkii la soo dhaafay, shirkaddu waxay nagula yaabi doontaa bisha Sebtember iyada oo leh 2 iPhone 6 moodal, mid leh shaashad 4,7 that ah waxay horey u ahaan laheyd wax soo saar tan iyo bishii hore iyo qaabka ugu weyn oo leh shaashad 5,5 that ah oo bilaabi doonta wax soo saar bartamaha Ogosto.
Miyaad u maleyneysaa inaan arki doonno 2 iPhone 6 nooc oo iib ah isla taariikhdaas?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 6 » Foxconn waxay bilaabaysaa xakamaynta tayada ee iPhone 6 kahor wax soosaarka tirada badan
Fikrad cusub oo cajiib ah oo ku saabsan baakadaha iPhone 6
Sirta koorsooyinka ay Apple baro shaqaalaheeda